Ururinta Masaarida ee Matxafka Ingiriiska | Safarka Absolut
Qoraalladii hore qaarkood waxaan ugu gudbinnay kuwa caanka ah Matxafka Ingiriiska, mid ka mid ah kuwa ugu waaweyn adduunka. Maanta waxaan kuu sheegi doonnaa mid ka mid ah ururinta ugu caansan ee la yaqaan: tan farshaxanimadii hore ee masar, oo leh in ka badan 75.000 oo gogo ', oo ka mid ah kuwa aan ku iftiimin karno:
Caanka ah dhagax rosette, taasoo suurta gelisay in la kala saaro qorista hieroglyphic ee Masaaridii hore.
El isku dhaca weyn ee Ramses II.
La aruurinta hooyada.
Naciimo ururinta Masar wuxuu bilaabay in laga abaabulo aasaaska matxafka, sanadkii 1753. Waxay si tartiib tartiib ah u sii kordheysay tan iyo markaas ilaa ay ka noqotay tan ugu weyn qeybteeda madxafka ka dib. Matxafka Qaahira. Duruufahaas ayaa xitaa u horseeday dad badan oo wadaniyiin Masaari ah inay ka hadlaan bililiqo oo u qaylinaya dawladda waddanka Waqooyiga Afrika ka dalbanaya in la soo celiyo khasnadahaas qadiimiga ah. Runtu waxay tahay ilaa iyo sanadkii 1913 sharciga Masar uu fasaxay dhoofin ee dhaxalka qadiimiga ah iyadoo shardi looga dhigayo inay jirto ballanqaad milkiilaha inuu ku ilaalinayo qaybaha si wanaagsan, sidaas darteed Matxafka haysashada khasnadahaan gabi ahaanba waa sharci.
Sidaan soo sheegnay, aruurinta hooyada waa mid ka mid ah kuwa ugu booqashada badan ee matxafka, laga yaabee halyeeyada in laga been abuurtay hareerahooda. Dhawaan, matxafka ayaa nagu farxay isagoo na tusaya natiijada shaqo dhammaystiran oo tii ugu dambeysay Teknolojiyada 3D, taas oo suurta gelisay in la soo bandhigo siraha hooyada wadaadka Nesperennub, oo ku dhowaad 3.000 sano jir ah. Ku hooyo Waxay ku dhex jirtaa sarcophagus aan la furi karin, maadaama ay jirto khatar ah inuu jirku sii xumaado. Tiknoolajiyaddan ayaa noo ogolaatay inaan aragno oo aan daraasad ku sameyno dhammaan astaamaha hooyada, sida aan ku arki karno sawirka, oo ay ku jiraan faahfaahin aan laga filaynin.
Hadaad u safarto London oo aad haysatid dhowr saacadood oo bilaash ah, ha ilaawin inaad booqato ururintan, oo kaa tagi doonta, shaki la'aan, aad ugu qanacsan.
Xigasho: Madxafka Ingiriiska.
Wadada buuxda ee maqaalka: Safarka Absolut » Ururinta Masaarida ee Matxafka Ingiriiska